जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस् बुधबारकाे राशिफल
June 21, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस् बुधबारकाे राशिफल
मेष राशि : आत्मविश्वास बढ्नेछ। टाढाबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। घरमा पाहुनाको आगमन हुनेछ । जोखिम मोल्ने हिम्मत राख्नुहाेला । व्यापारमा लाभ हुनेछ । लगानी राम्रो रहनेछ । सन्तान पक्षबाट स्वास्थ्य र अध्ययनमा चिन्ता रहनेछ। दुष्ट मानिसहरूबाट टाढा रहनुहोस्। दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ । वृष राशि : परिवार र साथीभाइसँग खुसीसाथ समय बित्नेछ। शारीरिक पीडा हुनसक्छ, […]
रवि लामिछानेले दिए दल दर्ताको निवेदन, भन्छन् ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति मै हुँ’
June 21, 2022 N88LeaveaComment on रवि लामिछानेले दिए दल दर्ताको निवेदन, भन्छन् ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति मै हुँ’
काठमाडौं । पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका छन् । उनी राष्ट्रिय सभागृहबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरे लगत्तै आयोग पुगेका थिए । पार्टीको चुनाव चिह्न घन्टी प्रस्ताव गरिएको छ । दलको सभापति आफू रहेको उनले जानकारी दिए । अरू पदाधिकारीमा देशले चिनेको नभएर देशलाई चिनेको अनुहार भएको बताए । दल दर्ताको निवेदन […]
काे काे छन् रवि लामिछानेकाे पार्टी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’मा ?
June 21, 2022 N88LeaveaComment on काे काे छन् रवि लामिछानेकाे पार्टी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’मा ?
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका रवि लामिछानेले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बसुन्धारामा राख्ने भएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीमा अहिले २१ जना रहेको बताए। पार्टीमा को-को छन् भन्नेबारे उनले खुलाएका छैनन्। तर पार्टीको पहिलो बैठक आजै बसुन्धारामा बस्ने उनले जानकारी दिए। केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटनलगत्तै पार्टीको बैठक बस्नेछ। उनले पार्टीमा चुनाव चिन्ह भने घन्टी प्रस्ताव गरिएको उनले […]
रवि लामिछानेले गरे नयाँ पार्टीको घोषणा, नयाँ पार्टीको नाम के ?
June 21, 2022 June 21, 2022 N88LeaveaComment on रवि लामिछानेले गरे नयाँ पार्टीको घोषणा, नयाँ पार्टीको नाम के ?
काठमाण्डौ । सञ्चारकर्मीको रवि लामिछानेले नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन । काठमाण्डौको राष्ट्रिय सभा गृहमा एक कार्यक्रममा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरेका हुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गर्दै लामिछानेले आजसम्मको योगदान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका उपलब्धिका लागि पुराना दल र नेताहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफू अरू पार्टीमा नजाने बताए । उनले अहिलेसम्मका सबै दलले […]
June 21, 2022 N88LeaveaComment on बालेन शाहले चुनावमा कति खर्च गरे ? हेर्नुस् विवरण
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले निर्वाचनमा गरेको खर्च सार्वजनिक गरेका हुन् । ढिला गरी खर्च सार्वजनिक गरेकोमा माफी माग्दै शाहले आफूले चुनावमा ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएका छन् । जसमध्ये एक लाख मतगणनाको समयमा मात्रै खर्च भएको साहको […]
एसइई नतिजा सार्वजनिक गरिँदै
June 21, 2022 N88LeaveaComment on एसइई नतिजा सार्वजनिक गरिँदै
काठमाडाैं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा यही असार मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि बोर्डले तीव्रताका साथ आवश्यक काम गरिरहेको जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले यसपटक एसइईको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्य तीव्ररूपमा भइरहेको जानकारी दिँदै प्राविधिकरूपमा समस्या नआए असार ३२ […]